Lugood playlist Waayey - 3 Siyaabaha Dayactir Waxaa
Waxaa kiiska sakhiray waa mid ka mid ah kuwa siyaabo inuu wax ka beddelo Lugood ah taas oo uu leeyahay sababo dhowr ah. Kuwa ugu badan ee dhan waa xaqiiqda ah in maktabadda Lugood ama barnaamijka software-ka la updated ay sabab u tahay, taas oo dib u soo celinta ee loo baahan yahay. Xaqiiqada ah in playlists ayaa la tirtiray kac ahayn iyo dib u soo celinta ee gobolka xad ka weyn ayaa loo baahan yahay sidoo kale waxay keenaysaa in this ifafaale. Sabab kale oo caadi ah oo ciidamada user ay u soo celiyaan Lugood waa kala iibsiga in si nidaam kale ama qalab dibadda looga baahan yahay meesha Lugood asalka ah waxaa markaas wareejiyo iyo nidaamka cusub in farsamooyinka loo adeegsado si loo soo celiyo Lugood ah.
Part1: Marka si loo soo celiyo Lugood ka gurmad ah?
Part2: Hagaaji maqan playlists Lugood leh Lugood Music Library.xml jir
Part3: soo celin waayay Lugood playlist ka macruufka qalab la TunesGo
Qaybta 1. Marka si loo soo celiyo Lugood ka gurmad ah?
Waxaa jira siyaabo badan si ay u hubiyaan in gurmad Lugood ee la soo celiyo si qofka Khasab ma aha in ay waajahaan arimo kasta oo arrintan la xiriira. Taxadar ama sharuud ah in arrintan la xiriira waa in la hubiyo in qalabka ku jira oo gurmad ah ayaa la abuuray waa lacag la'aan fayrusyada iyo arrimo kale. Sida shardi ah waxa kale oo lagu talinayaa in aan marnaba la abuuro gurmad ah oo ku saabsan aaladaha ku salaysan USB sida ay ka maqan tahay sugida oo ka heli kartaa musuqmaasuq arrintan la xiriira. Si aad ugu isticmaasho habka waxaa lagula talinayaa in ay marka hore la abuuro gurmad ah oo ku saabsan baabuur dibadda adag oo markaas hubiyo in gurmad la soo geliyo gal kombiyuutarka aad caadi u isticmaasho si aad u hesho shaqada lagu sameeyey oo ku dhameysan nidaamka. Ka dib markii qaar ka mid ah tallaabooyinka ay ku lug leeyihiin arrintan la xiriira:
i. Daar menu ee Lugood. Taas waxaa la samayn kartaa adigoo gujinaya geeska bidix ee kore ee maktabadda Lugood iyo xulashada "Show bedeley". Haddii kale waxa ay sidoo kale waxaa la samayn karaa adiga oo riixaya Ctrl + B daaqadaha. Wixii Mac bedeley waxaa lagu gagadin by default:
ii. Hadda user ay u baahan tahay in la raaco Edit Waddada> doorbidida> horay ka bedeley in lagu gagadin:
iii. Halkan user u leeyahay in la doorto ikhtiyaarka ah "Copy Faylal ay si Lugood Media Folder markii isagoo intaa ku daray in gal". Waxay kuu ogolaaneysaa in Lugood in la abuuro nuqul gudahood warbaahinta Lugood ee folder tago oo dhan files asalka ah meesha ay joogaan. In si kale loo dhigo gurmad toos ah la abuuri doono sidoo:
iv. Hadda ikhtiyaarka loo adkeeyo files oo markaas OK tahay in la sii adkeeyey si aad u hubiso in xoojinta la soo gabagabeeyo. Jidka in uu yahay in la raaco waa File> Library> abaabulo maktabadda
v. Tani hubiyo in dhammaan Lugood yihiin meel ka mid ah iyo xogta la sii xoojiyo ka dhigi doonaa. In la abuuro gurmad ku adag dibadda u kaxayn user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in bedeley waddada> Edit> doorbidida> sare waxaa doortay mar kale si aad u aragto meesha Lugood warbaahinta folder:
vi. Ka dib markii jidka isku folder Lugood waa in la jiido si drive dibadda adag:
vii. Marka suuqa kala iibsiga la soo gabagabeeyo maktabadda Lugood waxaa si guul leh u soo guuriyeen in drive dibadda adag. Si aad u soo celin Lugood ay kaga imaanayo waxa loo baahan yahay si loo hubiyo in drive dibadda adag waxa uu ku yaalaa mar kale. In Mac drive taas waxa uu ku yaalaa on desktop-ka halka daaqadaha drive taas waxa uu ku yaalaa aan computer. Marka ku yaalla gurmad ah oo uu soo kaydiyaa gal drvie tani ay tahay in la soo guuriyeen iyo dhejiyo meel la doonayo in kombiyuutarka. Inkasta oo haysta muhiim ah shaqada user ay u baahan tahay in la furo maktabadda Lugood si ay fariin soo socda u muuqataa ka user in uu doorto ikhtiyaarka dooran maktabadda ka dibna dooran folder la doonayo in loo wareejiyey ayaa dhawaan si uu u dhameystiro nidaamka.
Qaybta 2. Fix maqan playlists Lugood leh duug ah Lugood Music Library.xml
Si aad u hesho socda la habkan waa mid aad u muhiim ah in la ogaado in qaar ka mid ah faahfaahinta farsamo ay ku lug leeyihiin iyo nidaamka guud ahaan waa in aan la fuliyay iyada oo aan talo ah khabiir:
i. Xir software Lugood gebi ahaanba isla markaana la furo music folder Lugood ah. On u Mac yahay / Music / iyo daaqadaha waa in \_ Documents My \_ My Music \_ Lugood \_ ama \_ Username \_ My Music \_.
ii. User ayaa markaas uu leeyahay si loo hubiyo in folder maktabadda Lugood iyo inuu Lugood music library.xml waxaa jiiday gal desktop-ka:
iii. Hadda Lugood waa inay dib-u-bilowday iyo ka hor inta uu qabto hawlaha kale waxaa lagu qabtaa maktabada music waa in la keeno iyadoo la kaashanayo file> maktabadda> Liiska Import ah:
iv. User ayaa markaas u baahan yahay si loo hubiyo in file Lugood Music Library.xml waxa uu ku yaalaa iyo dhoofiyo Lugood si playlists waxaa synced mar kale. Qalab kale oo kasta oo uu soo synced la socdaan barnaamijyada software Lugood sidoo kale hubin doona in playlists ay yihiin synced marka ay ku xiran yihiin mar kale. Tani waxay sidoo kale dhameystiray nidaamka.
Qaybta 3. soo celin waayay Lugood playlist ka macruufka qalab la TunesGo
TunesGo waa mid ka mid ah barnaamijyada software ugu fiican oo aad u hubiso in playlist Lugood la waayay ayaa la soo celiyay kaliya qasabno yar oo innaba shuqul adag ku lug leh arrintan la xiriira. Si aad ugu isticmaasho habka Waxa lagu talinayaa in la hubiyo in dhibaatada la hadlay hab waa hufan oo wax ku ool ah iyo barnaamij software lahayn kale TunesGo ka sokow siiyaan waxtarka sida. Ka dib waa habka ku xusan:
ii. Qalab macruufka ah waa in lagugu xiro PC ama Mac si loo hubiyo in software ah waxaa lagu ogaadaa oo soo bandhigay natiijada:
iii. On guddi bidix user ay u baahan tahay in guji playlists si loo hubiyo in dhammaan playlists in ay yihiin synced qalabka waxaa lagu soo bandhigay. Dooro playlists u baahan dejinta ah kadibna riix nuqul maktabadda Lugood,
iv. Tani gudbin doona oo dhan playlists ilaa maktabadaha Lugood iyo sidoo kale hubin doona in nidaamka halkan ka baxayo. Tani gabal laga cabsado of technology waa inuu xaqiijiyo in wixii kaloo la sameeyo markii waynay jidaynayey oo dhan user si aad u hesho kursiga driving ka.
Wax walba oo aad rabto in aad doonayso inaad ogaato oo ku saabsan Lugood iyo hayaan iCloud
> Resource > Lugood > 3 Siyaabaha Soo Celinta playlists Lugood